Imfihlo yaseMzantsi - I-Airbnb
"Imfihlo yaseMazantsi" yindlu entle esanda kulungiswa emaphandleni. Inesango layo elahlukileyo ukuze iindwendwe zethu zize zihambe ngendlela ezithanda ngayo. Indawo yethu ikufutshane neendawo zokutyela kunye nokutya kwiilali ezisingqongileyo kunye nedolophu yaseLimerick. Uya kuyithanda indawo yethu ngenxa yebhedi epholileyo, ukukhanya, ikhitshi elitsha, kunye nokuzola kukonke. Indawo yethu ifanelekile kwizibini ezitshatileyo, abahambi bebodwa, kunye nabahambi beshishini kunye nabo bathanda ukuhamba kwindawo eluhlaza yaseIreland.
"Imfihlo yaseMazantsi" yindlu entle, esandula ukugqitywa ukwakhiwa kabini ebonelela ngegumbi lokulala elibanzi kumgangatho ophezulu kunye negumbi lokuhlambela le-en-suite. Kumgangatho ongezantsi kukho ikhitshi / igumbi lokuhlala elicwangcisiweyo elivulekileyo kunye nebhedi yesofa etofotofo. Kwakhona umgangatho ophantsi yindlu yangasese eyahlukileyo ukwenzela ukuba ube lula. Indawo yokupaka yasimahla iyafumaneka ngaphakathi kwesango elikhuselekileyo kwaye sikubonelela ngesango lakho elikude ukuze uyisebenzise ngexesha lokuhlala kwakho.
4.64 · Izimvo eziyi-100
Iindawo ezininzi ezivulekileyo njengoko iipropati kule ndawo zinkulu. I-Curraghchase Forest Park yabucala iyafikeleleka kwiindwendwe zethu simahla - eli lihlathi lendalo elimangalisayo elinemizila yeendlela zokuhamba ezinokonwatyelwa.
Kukho umntu oza kunikela iingcebiso kunye neengcebiso malunga nokuba ungaya phi kwaye ubone ntoni kule ndawo intle yaseIreland.